2 Mpanjaka 18 - Ny Baiboly
2 Mpanjaka toko 18
Ezekiasa mpanjakan'i Jodà - Ny fanafihan'i Senakeriba mpanjakan'i Asiria.
1Tamin'ny taona fahatelo nanjakan'i Osea, zanak'i Elà mpanjakan'Israely, no vao nanjaka kosa Ezekiasa zanak'i Akaza mpanjakan'i Jodà. 2Dimy amby roapolo taona izy fony vao nanjaka, ary sivy amby roapolo taona no nanjakany tao Jerosalema. Ny reniny dia natao hoe Abì, zanak'i Zakariasa. 3Nanao izay mahitsy eo imason'ny Tompo izy, araka izay rehetra nataon'i Davida rainy. 4Nofoanany ny fitoerana avo, nomontsaniny ny tsangam-bato, nokapainy ny aseraha, notorotoroiny ny menarana varahina nataon'i Moizy; fa hatramin'izay mbola nandoroan'ny zanak'Israely zava-manitra teo anatrehany sy nantsoiny hoe Nohestàna. 5Iaveh Andriamanitr'Israely no nitokiany, ka dia tsy nisy tahaka azy tamin'ny mpanjakan'i Jodà rehetra, na ny tatý aoriany, na ny tany alohany. 6Nifikitra tamin'ny Tompo izy, ka tsy mba nivily niala taminy, fa nitandrina ny didy nandidian'ny Tompo an'i Moizy. 7Dia nomban'ny Tompo izy, ka nahomby tamin'izay rehetra nataony.
Niodina tamin'ny mpanjakan'i Asiria izy, dia afaka tsy nanompo an'io intsony. 8Nandresy ny Filistina hatrany Gazà izy, ka nandrava ny taniny, hatramin'ny tilikambon'ny mpiambina, ka hatramin'ny tanàna mimanda.
9Tamin'ny taona fahefatra nanjakan'i Ezekiasa mpanjaka, izay taona fahafito nanjakan'i Osea, zanak'i Elà, mpanjakan'Israely, no niakaran'i Salmanasara mpanjakan'i Asiria hamely an'i Samaria sy nanaovany fahirano azy. 10Nony afaka telo taona, dia afany ny tanàna, dia tamin'ny taona fahenina nanjakan'i Ezekiasa, izay taona fahasivy nanjakan'i Osea, mpanjakan'Israely, no nahafahana an'i Samaria. 11Dia nentin'ny mpanjakan'i Asiria ho babo tany Asiria Israely, ka namponeniny tao Halà, teo amoron'i Habora, onin'i Gosana, ary teny amin'ny tanànan'ny Meda, 12satria tsy nihaino ny feon'ny Tompo Andriamaniny izy, fa nivadika ny fanekeny, ary tsy misy nohenoiny na narahiny izay rehetra nodidian'i Moizy mpanompon'ny Tompo.
13Tamin'ny taona fahefatra ambin'ny folo nanjakan'i Ezekiasa, dia niakatra hamely ny tanàna mimanda rehetra any Jodà, Senakeriba mpanjakan'i Asiria, ka nahafaka an'ireny. 14Ary Ezekiasa mpanjakan'i Jodà, naniraka hilaza amin'ny mpanjakan'i Asiria tany Lakisa hoe: Efa diso aho, fa mialà amiko hianao, dia hoentiko izay hampitondrainao ahy. Dia talenta volafotsy telon-jato sy talenta volamena telopolo no nasain'ny mpanjakan'i Asiria naloan'i Ezekiasa mpanjakan'i Jodà. 15Ka nomen'i Ezekiasa avokoa ny volafotsy hita tao an-tranon'ny Tompo, sy tao amin'ny rakitry ny tranon'ny mpanjaka. 16Tamin'izany andro izany, novakin'i Ezekiasa mpanjakan'i Jodà ny varavarana aman-tolam-baravaran'ny tempolin'ny Tompo, izay efa nopetahan'i Ezekiasa mpanjakan'i Jodà takela-bolamena, ary nomeny ny mpanjakan'i Asiria ny volamena.
17Ary ny mpanjakan'i Asiria naniraka ny jeneraliny ambony indrindra sy ny lehiben'ny eonoka, ny komandy mpandroso divay, mbamin'ny miaramila maro koa, avy any Lakisa, ho any amin'i Ezekiasa mpanjaka, any Jerosalema. Dia niakatra izy ireo, ka tonga tany Jerosalema. Nony tonga tao izy, dia nijanona teo anilan'ny lakan-dranon'ny farihy ambony, amin'ny làlana mankamin'ny sahan'ny Mpamotsy lamba, 18ka niantso ny mpanjaka. Ary Eliasima zanak'i Helkiasa lehiben'ny tao an-dapa no nivoaka nankeo amin'izy ireo, mbamin'i Sobna mpanoratra, Joahe zanak'i Asafa mpitahiry boky.
19Dia hoy ilay komandy mpandroso divay tamin'izy ireo: Lazao amin'i Ezekiasa hoe: Izao no lazain'ny mpanjaka lehibe, mpanjakan'i Asiria: Inona izato toky ihanteheranao? 20Niteny hianao, - teny tsy misy fotony, - nanao hoe: Manan-tsaina aman-kery hoenti-miady aho! Fa ankehitriny kosa dia matoky an'iza hianao no dia miodina amiko? 21Indro fa volotara vaky no itokianao ankehitriny, dia i Ejipta, ka izay mitehina aminy voatsindrony sy voatrobany avokoa, fa izany tokoa Faraona mpanjakan'i Ejipta ho an'izay rehetra matoky azy. 22Angamba hianareo hanao amiko hoe: Iaveh Andriamanitray no itokianay. Kanefa raha izy, moa tsy efa nofoanan'i Ezekiasa va ny oteliny amam-pitoerana avony, ary efa nolazainy tamin'i Jodà sy Jerosalema fa hoe: Eo anoloan'ity otely eto Jerosalema ity no hiankohofanareo. 23Koa ankehitriny aoka hanao fanekena amin'ny tompoko mpanjakan'i Asiria hianao, dia homeko soavaly roa arivo, raha mahita mpitaingin-tsoavaly hitaingina izany! Hataonao ahoana moa no fanohitra ny lehibe anankiray amin'ny mpanompon'ny tompoko, na dia izay kely indrindra aza? 24Fa noho ny kalesy amam-pitaingin-tsoavaly no itokianao an'i Ejipta. 25Nefa ankehitriny moa tsy avy amin'ny Tompo va no niakarako hamely ity fitoerana ity ho rava? Fa hoy Iaveh tamiko: Miakara hamely io tany io, ka ravao izy.
26Dia hoy Eliasima zanak'i Helkiasa sy Sobna ary Joahe amin'ny komandy mpandroso divay: Aoka ho teny arameana no hiresahanao amin'ny mpanomponao, fa hainay izany, fa aza fiteny jodaika no iresahanao aminay, ka azon'ny sofin'ny vahoaka izay eo ambony manda. 27Fa namaly ny mpandroso divay ambony indrindra nanao hoe: Moa amin'ny tomponao sy aminao va no nasain'ny tompoko hilazana izany teny izany, fa tsy amin'ireo olona mipetraka eo ambony manda, mba hihinanany ny dikiny sy hisotroany ny ditsany miaraka aminareo?
28Tamin'izay dia nandroso ny mpandroso divay ambony indrindra, ka niantso tamin'ny feo avo tamin'ny fiteny jodaìka dia nanao izao teny izao hoe: Henoinareo ny tenin'ny mpanjaka lehibe, mpanjakan'i Asiria! 29Izao no lazain'ny mpanjaka: Aza mety hofitahin'i Ezekiasa hianareo, fa tsy hahavonjy anareo amin'ny tànany izy tsy akory. 30Aza manaiky hampatokin'i Ezekiasa an'ny Tompo hianareo, saingy ilazany hoe: Tsy maintsy hovonjen'ny Tompo tokoa isika, ka tsy hatolotra eo an-tanan'ny mpanjakan'i Asiria ity tanàna ity. 31Aza mihaino an'i Ezekiasa fa izao no lazain'ny mpanjakan'i Asiria: Manaova fanekem-pihavanana amiko ka maneke ahy hianareo, dia samy hihinana ny voaloboka aman'aviavinareo, samy hisotro ny rano ao am-pantsakanareo, 32mandra-pihaviko hitondra anareo ho any amin'ny tany tahaka ny anareo, dia tany misy vary aman-divay, tany misy mofo amam-boaloboka, tany misy oliva tsara, diloilo, sy tantely, ka ho velona hianareo fa tsy ho faty. Koa aza mihaino an'i Ezekiasa, fa vohony omeny anareo no ilazany hoe: Hovonjen'ny Tompo isika. 33Moa ny andriamanitry ny firenena, samy nahavonjy ny taniny avy, tamin'ny tanan'ny mpanjakan'i Asiria va? 34Aiza ny andriamanitr'i Emata sy Arfada? Aiza ny andriamanitr'i Sefarvaima sy Anah ary Avah? Moa nahavonjy an'i Samaria tamin'ny tànako va ireny? 35Iza amin'ireo andriamanitry ny tany rehetra no efa nahavonjy ny taniny tamin'ny tànako, no hoe Iaveh hahavonjy an'i Jerosalema amin'ny tànako?
36Nangina ny vahoaka, fa tsy namaly azy na dia indraim-bava aza, satria efa nomen'ny mpanjaka teny hoe: Aza misy mamaly hianareo. 37Dia nankao amin'i Ezekiasa Eliasima zanak'i Helkiasa lehiben'ny tao an-dapa, sy Sobna mpanoratra, ary Joahe zanak'i Asafa mpitahiry boky; voatriatra ny fitafian'izy ireo, ary nolazainy taminy ny tenin'ny mpandroso divay ambony indrindra. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.2792 seconds